मुम्बइमामा भारी वर्षाका कारण भवन भत्किँदा सात जनाको मृत्यु – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/मुम्बइमामा भारी वर्षाका कारण भवन भत्किँदा सात जनाको मृत्यु
मुम्बइ। भारतको आर्थिक राजधानी सहर मानिने मुम्बइमा बिहीबार अपरान्ह दुई ओटा आवासीय भवन भत्किँदा सात को मृत्यु भएको छ। दुई फरक स्थानमा भएको यस दुर्घटनामा परी अरु कैयौँ व्यक्ति घाइते भएका बताइएको छ । अरु केही व्यक्ति पुरिएको आशंका पनि गरिएको छ। तर यसको विस्तृत विवरण भने आएको छैन।
मुम्बइको बजार इलाकानजिकको भानुशालीमा आवासीय भवन भत्किएको थियो । त्यसमा परी पाँच जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। मुम्बइमा गएको तीन दिनदेखि भारी वर्षा जारी रहेको छ । सो वर्षाका कारण उक्त भवन भत्किएको अुनमान गरिएको छ।
भत्किएको भवनमा परी पुरिएका वा च्यापिएका व्यक्तिको उद्वारको प्रयास भइरहेको बताइएको छ । मुम्बइको भानुशाली भवन बिहीबार अपरान्ह २ः३० बजे भत्किएको थियो। भवनको केही भाग खसेको र त्यसमा परी पाँच जनाको ज्यान जानुको साथै अरु २३ जना घाइते भएका छन्।
उनीहरुलाई ठूलो संख्याका सुरक्षाकर्मी लगाएर उद्धार गरिएको बताइएको छ। मुम्बइका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरे सो दुर्घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्यका लागि निर्देशन दिएका थिए।मुम्बइको प्राकृतिक प्रकोप विभागका एकजना अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार उक्त भत्किएको भवनको भग्नावषेशबाट पाँच जनाको शव निकाएको छ।
ती अधिकारीले त्यस भवनबाट अरु केही व्यक्तिलाई भने जिवीतै उद्वार गरिएको पनि जनाएका छन् । त्यसैगरी मुम्बइकै मलादा क्षेत्रमा भएको अर्काे भवन भत्किँदा अरु दुई जनाको ज्यान गएको छ । सो दुर्घटना बुधबार साँझ भएको एक जना प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
दु:खद् खबर : नेपाल-भारत सी,मामा ए,सएसबीले ने,पालीमाथि य,सरी ठो’ के गो’ ली.
सकियो चिन्ता, नेपालसहित विश्‍वभर को’रोनाको खो’प पठाउने चीनको तयारी !
BREAKING NEWS::सडक दुर्घटनामा तेजाको दुखद निधन, सुपरस्टार शव हेर्न पनि गएनन्
”खुसीको खबर ! चीनले बनाएको को’रोनाविरु’द्धको खोप तीन महिनाभित्र बजारमा आउने !
कोरोना खोपलाइ लिएर अमेरिकाले दियो यस्तो खुसिको खबर